Blog Blog oo ah "Tag" Ciyaaraha iyo Tacaburka - THE INDIAN FACE
Waxaan jecel nahay buuraha iyo dhamaan cayaaraha ay na siiso!
Buurtu waxay na siisaa wax badan oo ay tahay inaynu si isku mid ah u siino, ixtiraam weyn si ay u sii ahaato meeshaas si ay u timaado oo ugu raaxaysato xorriyadda dhabta ah ee aynu raadineyno markaan iyaga galno. Waa maxay isboortiga iyo buurta aad ugu jeceshahay? Haddii aadan wali siin nolosha buuraha iyo ciyaaraha isboortiga fursad, ha sugin wax intaas ka badan! Xaqiiqdii kama niyad jabi doontid ...
Koofiyadaha u waxyooday Mountain Adventure iyo isboorti xad dhaaf ah!
Dabeecadda ayaa ku martiqaadaysa buuraha 2021! Wax walbana waa inaan jecel nahay isboortiga, gaar ahaan hadday tahay buuraha! Waxaa jira noocyo badan oo isboorti ah oo aad ka heli karto adrenaline, oo aad ku qancin karto balwaddaada xad-dhaafka ah. Miyaad hore u taqaanay iyaga? Kuwee ka mid ah ayaad ku dhaqantaa? Ka ogow wax badan oo ku saabsan baaxadda ay cayaaraha buuruhu ina keeneen!
Dhacdooyinka isboorti ee yiri HAA ilaa 2021!
In kasta oo 2020 ay sababtay in aan seegno ku dhowaad dhammaan dhacdooyinka isboorti ee aan ugu jecel nahay, haddana 2021-kan waxaan la soconnaa baytariyada la soo xiray oo waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ogaanno goorta taariikhaha ciidaha waaweyn iyo dhacdooyinka cayaaraha ay noqon doonaan. Halkan waxaan kaaga tagaynaa waxaan ognahay inuu imaan doono sanadka 2021-ka!
Fuulitaanka dhagaxa aniga ayaa ah mid ka mid ah anshaxyada aan ugu jeclahay waana midda ugu dheer ee aan ku tababaranayay sidii isboorti, sidaa daraadeed u guurista kor u qaadista sawir qaadista aniga waxay ahayd geedi socod dabiici ah.
Muraayadaha Orodka ugu fiican!
Lama huraan marka aad ku tababarto Orodka iyo Socodka. Ciyaaraha dibedda ayaa si xorriyad leh ugu xoreeya jirka iyo ruuxa. Waxay na siinayaan dareen xorriyad ah oo aadan hubaal ka heli karin gudaha. Kaliya maahan labo muraayadaha indhaha oo ku habboon nashaadaadyada noocaan ah, waxaa ugu wanaagsan in la xirto muraayadaha isboortiga oo tayo leh oo sifiican wejigayaga ugu habboon isla markaana halkaas ku sii jira ka hor dhaqdhaqaaq kasta oo aan sameyno.
10 waxyaabood oo ay tahay inaad ogaato oo ku saabsan buuraha ama buurta
El Buur-jiifka Waa dhaqan isboorti oo ku lug leh fuulitaanka iyo ka soo degga buuraha dhaadheer, oo ku lug leh taxane xirfado, aqoon iyo farsamooyin loogu talagalay in lagu gaaro halka ugu sarreysa shirwaynaha. Mountaineering waxay u taagan tahay inay tahay anshax aad u ballaaran oo jireed iyadoo kuxiran takhasuskeeda, oo ay si weyn u aqoonsan yihiin bulshada isboortiga iyo guud ahaan dadweynaha. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan edbintan cajiibka ah!
Isku duubista fiidiyowyada cayaaraha barafka ee aadka u cajiibka ah
Baraf, baraf iyo baraf badan! Ma jeceshahay cayaaraha xad dhaafka ah iyo xiisaha? Gudaha The Indian Face Waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho fiidiyowyo cayaareed oo jiilaal ah oo hubaal ahaan kaaga dhigi doonta hadal la'aan. Hadaad rabto inaad aragto waxyaabaha ugu yaabka badan ee layaabka leh, abtirsiinyada iyo waxyaabaha waalan ee sanadkan, guji oo la yaab naftaada heerkan adrenalin.
Qalabyada ugu wanaagsan ee lagu tababaro isboorti jiilaalka oo aan qabow ahayn
Marar badan waxaan dareemnay caajis yar marka ay timaado ku celcelinta isboortiga barafka sababtoo ah waxyaabo ka baxsan waxyaabaha sida qabowga. Marka sanadkaan waxba ma hor istaagi karaan The Indian Face Waxaan go'aansanay inaan kuu soo qaadano talooyin taxane ah oo kaa caawin doona inaad ka faa'iideysato barafka adigoon ka walwalin qabowga. Diyaar u noqo tallaabo nala qaado!
Ciyaaraha xilliga qaboobaha ee ugu xiisaha badan
Dhamaanteen waan ognahay isboortiga xilliga qaboobaha sida caadiga ah sida barafka, barafka barafka, ama barafka barafka. Laakiin waxaa jira ciyaaro badan oo isboorti haddii aad rabto wax ka duwan. Gudaha The Indian Face Waxaan raadiney qaar ka mid ah, si aan ku siino sharraxaad kooban si aan cidna looga tegin cayaaraha jiilaalka ay jecel yihiin. Isu diyaari inaad la yaabto!
Ciyaaraha jiilaalka waxaad dooneysaa inaad tijaabiso sanadkaan
Imaatinka xilliga qaboobaha micnaheedu maahan inaan ku xirno guriga, taa bedelkeeda, waa qoryaha bilaabaya xilliga qaboobaha. Gudaha The Indian Face Weli ma joogi karno xitaa haddii ay tahay qabow iyo maadaama aan ognahay inaad adiguna tahay ruux aan degganeyn oo aan la joojin karin, mar walba raadinaya khibrado cusub iyo waxyaabo aad sameyso, waxaan kuu soo qaadaneynaa ciyaaro qaar oo aad jeceshahay inaad isku daydo jiilaalkaan. Saafi adrenalin!
Talooyin looga hortago qatarta fatahaadda ama dariiqyada
Waa wax caadi ah in baraf weyn ka dib, annaga, kuwa jecel cayaaraha jiilaalka, aan ku eegno buurta rabitaan ficil ah. Laakiin maanta waxaan dooneynaa inaan ku xasuusino halista ka dhalan karta barafkan urursiga barafleyda ama kuwa barafka wata waxaan sidoo kale ku siineynaa talooyin dhowr ah oo looga hortago qatarta qulqulka ama barafka. Baahnayn
Sitesacular Kite Surf waxaa xoojiyay Mini
Eeg qaniisadan xiisaha leh ee uu ku shaqeynayo gaari uu Marc Jacobs tijaabiyay isagoo gacan ka helaya Kooxda Kites Switch. Dhisida gaari ku socon doona xoogga dabaysha oo gabi ahaanba nadiif noqon doona wuxuu ahaa hadafka caqabadan. Jacobs wuxuu helay Mino duug ah wuxuuna la yimid fikradda ah
Surf on mawjadaha waaweyn ee Punta Galea ee Getxo
Maanta waxaan soo qaadaneynaa fiidiyowga loo yaqaan 'Punta Galea Challenge' ee sanadka 2015, oo ah dhacdo sagxad caan ku ah joogitaanka hirarka waaweyn, inta u dhexeysa lix illaa siddeed mitir, taas oo ka dhigaysa wax cajiib ah. Munaasabaddan, Nic Nic oo Mareykan ah ayaa ku guuleystey daabacaaddii hore ee sagaalaad ee Punta Galea Challenge, oo la qabto
Fadhi dabayl xamaasad leh oo ka socda jasiiradda Tasmania
Tasmania, waa dal qayb ka ah barwaaqa sooranka Australia, waxay martigelisay koox ka kooban dabeylaha ugu fiican adduunka (oo ay ku jiraan Victor Fernández, Isbaanish Storm Chaser) muddo labo maalmood ah dabeylo xoog leh iyo hirar aad u waaweyn oo ku yaal meel dhagax ah iyo duurjoogta . Markan Thomas Traversa, Dany Bruch, Leon
Ruushku wuxuu ku kacayaa -15 digrii gudaha Vladivostok
Weligaa ma ku kacday heerkul aad u hooseeya? Ma jeceshahay inaad dabaasha jiilaalka? Ma qaadan laheyd dharkaaga dharkaaga iyo guddigaaga oo waxaad raadineysaa hirar ku yaal xeeb 15 darajo ka hooseysa eber? Malaha maya. Ama waxaa laga yaabaa haa, waxaan ku leenahay dad badan oo jecel isboortiga xad dhaafka ah dhagaystayaasheena. Laakiin maxaa hubaal ah
Ku boodida Ski iyo Ski Duulista: follies in boodhka barafka ee 80meeyadii
Intii lagu guda jiray 80-meeyadii, tartamada boodboodka ee barafka ayaa ka mid ahaa cayaaraha ugu daran ee lagu dhaqmi karo. Xitaa maanta wali waa loo tixgelin karaa sidaas. Fiidiyowgaan ayaa si aad ah loogu talinayaa haddii aad jeceshahay ciyaartan, boodboodyo cajiib ah. xawaaraha, iyo saxsanaanta soo degitaanka cajiibka ah
Sida looga badbaado dulmanaha: sheeko run ah (fiidiyoow cabsi leh)
Maanta waxaan idinla wadaagaynaa muuqaal cajaa’ib leh oo xoog leh oo aan cidna uga hari doonin. Uguyaraan kuwa xoreeya ama sabuurada ama barafka ku wata meelaha u nugul barafka. Fiidiyowga soo socda waxaad ku arki doontaa sida koox ka mid ah kuwa baaskiilku ay si xur ah ugu sameynayeen aag baraf ah
Ha aaminin wadada ama wadada dadka kale barafka
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa fiidiyoow xiisa leh oo aan kaaga digeyno halista inaad raacdo raadka raacayaasha kale marka aad guddigaaga si xor ah ula dhex socoto buuraha barafka wata. Dhexdeeda waxaad ka arki kartaa sida baraf-barafka ku socdaalaya barafka, kuna qalabeysan kaameradda mobilada ee GoPro, inuu raaco raadadka